Isina kukurirwa: multiplatform chaiyo-nguva nzira mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Asina kukurirwa iri yemahara uye yakavhurwa sosi yemavhidhiyo mutambo. Ino inguva chaiyo yevatambi vakawanda mutambo mutambo zvichibva pamunhu wekutanga uye timu yekutamba.
Vatambi vanorwa mune mutorwa kana timu yevanhu vane melee zvombo uye zvakajairwa ballistics zvakateerana. Chinangwa chemutambo ndechekuparadza timu yevavengi uye zvimiro zvinoita kuti vararame, pamwe nekuona kuti mabheseni uye kuwedzerwa kwechikwata pachawo kuchichengetedzwa.
Vatambi vacho vanogona kusarudza kubva kuchikwata chero chipi, vachipa chiitiko chakasiyana zvachose pamativi esesezvo vanhu vachitarisa pane refu-renji firepower, nepo vatorwa vachivimba nekukurumidza kufamba uye kubira.
Kukwidziridzwa kwemapoka ese ari maviri kunowanikwa pamwe nekubatanidzwa kweumwe neumwe mashandiro uye kudzora mepu yetimu, kuvhura kupinda kune zvombo zvine simba nemidziyo yevanhu uye akakura, mafomu anotyisa evatorwa.
1 Nezve iyo Isina kukurirwa mutambo
2 Maitiro ekuisa Unvanquished paLinux?
Nezve iyo Isina kukurirwa mutambo
Unvanquished inoteedzera mutambo wayo mutsara kudzoka kune Tremulous, iri yakavhurika sosi mutambo uyo wakabudirira kwazvo. Mutambo uripo uye zviwanikwa zvemitambo zviri pasi peCC BY-SA 2.5 rezinesi reCreative Commons, nepo iyo daemon injini iri pasi peGPLv3.
Unvanquished inogadzirwa nechikwata chevanozvipira vanotangisa Alfa nyowani paSvondo yekutanga yemwedzi wega wega.
Isina kukundwa forogo yeTremulous, inofambiswa neinjini yeDaemon. Injini yeDaemon inopa mutambo uyu pakupedzisira inoenderana neQuake 3, pamwe nezvimiro kubva kuET: XreaL, pamwe nekwedu kodhi yekuedza.
Iyo daemon injini forogo yeiyo OpenWolf injini inosanganiswa nezvinhu kubva kune mamwe maQuake akatorwa injini dzakadai seXReaL uye ET-XreaL. Kubudirira kwaro kuri kuenderera munzira kwayo kubva kune avo vayakatangira.
Vagadziri parizvino vari munzira yekunyorazve injini muC ++ kuti ive nani kwenguva yakareba.
Mimwe yemitambo maficha anosanganisira:
Iyo yazvino OpenGL vhezheni 3 inoenderana inoendesa.
Mhedzisiro mhedzisiro, kusanganisira kuwedzera, kupenya mwenje, kufamba kusviba, kupisa kupisa, uye kuwedzera kwevara.
Yemazuva ano libRocket mushandisi interface inotsigira HTML4 / CSS2 zviyero.
Native mutengi VM rutsigiro rwemitambo pfungwa.
IQM uye MD5 mamodheru ane skeletal kuchangamuka uye maitiro echiratidzo ehupenyu.
2D minimaps uye bhakoni system munguva chaiyo.
Tsigiro yemamapu akajairwa, akajeka, akajeka uye anopenya
Navmesh-based bots iyo inoshandisa hunhu miti.
Rutsigiro rwemunharaunda nenzvimbo dzakasiyana-dzakaburitswa munharaunda dzakatowanikwa
Maitiro ekuisa Unvanquished paLinux?
Si vanoda kuisa uyu mutambo pane yavo system ivo vanofanirwa kuteedzera iwo mirairo iyo yatinogovana pazasi zvichienderana nekuparadzira kwavari kushandisa.
Para avo vari vashandisi veArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero sisitimu yakatorwa kubva kuArch Linux Unogona kuisa uyu mutambo zviri nyore.
Ivo vanofanirwa chete kuve neAUR wizard yakaiswa yekuisa kunyorera kubva kune ino repository, unogona kutarisa rinotevera bhuku kwandinokurudzira vamwe.
Iwo wekuraira wekuisa ndeuyu:
Kune zvimwe zvekugovera isu tinofanirwa kuunganidza mutambo.
Kana vari vashandisi ve Debian, Ubuntu kana chero chinobva pane izvi, isu tinofanirwa kuisa zvimwe zvinoenderana nemirairo inotevera:
Kana iri Fedora uye zvigadzirwa, kutsamira kwatinofanira kuisa ndeizvi:
Kana vari vashandisi ve vhuraSUSE kutsamira kunofanirwa kuiswa ndekwe:
Iye zvino Tinofanira kurodha pasi mutambo kuti tiuunganidze kubva kuGitHub na:
Uye isu tinopfuurira kuumbiridza ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Isina kukurirwa: multiplatform chaiyo-nguva nzira mutambo